Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: Word Tips (# 6): Word ထဲမှာ ဂဏန်းတွက်မယ် အပိုင်း(၂) Ctrl+F9, =formula, F9
Word Tips (# 6): Word ထဲမှာ ဂဏန်းတွက်မယ် အပိုင်း(၂) Ctrl+F9, =formula, F9
Word ထဲမှာ ဂဏန်းတွက်လို့ ရတဲ့ နောက်ထပ်နည်းတစ်နည်း ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။
(*** အရင်တခါက ပြောပြခဲ့တဲ့ နည်းကို ပြန်ဖတ်မယ် ဆိုရင် ဒီမှာပါ။)
တွက်ချင်တာက အပိုင်း(၁) က ဖော်မြူလာနဲ့ တူတူပဲ ဆိုပါတော့ ...
123456 ထဲကနေ 23456 နှုတ်ချင်တယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ 11111 ထည့်ပေါင်းမယ်။ အဲ… ရလဒ်ကို9နဲ့ မြှောက်မယ်။ လိုချင်တာက နောက်ဆုံးရလဒ်ရဲ့ 10 ရာခိုင်နှုန်း။ ဒါကို ချရေးရင် (123456-23456+11111)*9*10% ပေါ့။ နမူနာ ဖော်မြူလာကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း 1+1 လို့တောင် ပေးချင်ပါရဲ့ဗျာ။ ပေါ့သွားမစိုးလို့ နည်းနည်း ဆားခတ်လိုက်တာ သည်းခံပါ :)
၁) Word ဖိုင်ကို ဖွင့်ပါ။ အဖြေရေးချင်တဲ့ နေရာမှာ ကာဆာ (Cursor)ချပါ။ Ctrl ကီးနဲ့ F9 ကီး ကို တွဲနှိပ်ပါ။ [Ctrl+F9]
၂) ကာဆာချထားတဲ့ နေရာမှာ လက်သည်းကွင်း မည်းမည်းလေး တစ်စုံ ပေါ်လာပါမယ်။ (ဒီပုံလို အရာလေးပါ။ ) အဲ့ဒီ လက်သည်းကွင်း မည်းမည်းလေး တစ်စုံရဲ့ အလယ်မှာ ကာဆာကျလျက်သား ရှိပါမယ်။ ကာဆာ ကျမနေပါက ၎င်း အလယ်နေရာကို ကာဆာချပါ။
၃) ညီမျှခြင်း သင်္ကေတ (=) ရေးပါ။ (ဒီပုံလို ဖြစ်သွားပါမယ်။ ) ညီမျှခြင်းရဲ့နောက်မှာ ကိုယ်တွက်ချင်တာ ရေးချလိုက်ပါ။ ကျနော် နမူနာပေးတဲ့ ဖော်မြူလာကို ရေးချလိုက်ရင်(ဒီပုံလို ဖြစ်သွားပါမယ်။ )
၄) တွက်ချင်တာ ချရေးပြီးလျှင်... F9 ကီး အရင် နှိပ်ပါ။ [F9] အဖြေ တန်းပေါ်ပါမယ်။ မပေါ်သေးရင် Shiftကီးနဲ့ F9 ကီးကို တွဲနှိပ်လိုက်ပါ။ [Shift+F9] အဖြေရပါပြီ။ (အဖြေကို ဒီပုံမှာ ရှုပါ။ )
Word ထဲမှာ ဂဏန်းတွက်မယ် အပိုင်း(၂) ဒီမှာ ပြီးပါပြီ။
အတိုကောက်မှတ်မယ်ဆို [Ctrl+F9, =formula, F9] လောက်မှတ်ထားရင် အသုံးတည့်မှာပါ။ :)
အောက်မှာ ရေးမှာက ဒီ သဘောတရားကို နည်းနည်းလောက် ဖြည့်စွက်ရှင်းပြမှာပါ။ ဆက်မဖတ်ခင် အပေါ်က အဆင့်လေးတွေ အရင် လုပ်ကြည့်ဘို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
ှQ & A
Q: အဆင့်(၁)မှာ ကီး [Ctrl+F9] ကို ဘာလို့ နှိပ်ရသလဲ ?
A: Field အခွန်/အလွတ် တစ်ခု လိုချင်လို့ပါ။ [Ctrl+F9] နဲ့ Insert menu က Insert Field နဲ့ တူတူပါပဲ။
Q: Field ဆိုတာ ?
A: Field ဆိုတာ Word ဖိုင်ထဲမှာ အချက်အလက် (data) တွေ သိမ်းဘို့ လျာထားတဲ့ နေရာ (placeholder)ပါ။ Field တစ်ခုကို လက်သည်းကွင်းမည်းမည်းလေး တစ်စုံနဲ့ ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ကွင်းအစဟာ Field ၏ အစ ဖြစ်ပြီး ကွင်းအဆုံးဟာ ထို Field ၏ အဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ထို လက်သည်းကွင်းလေးဟာ Field တစ်ခု၏ အသက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကီးဘုတ်မှ ရိုက်ထည့်၍ မရပါ။
Q: Field ကို ဥပမာ ပေးမယ်ဆိုရင် ?
A: စာမျက်နှာနံပတ် ၊ နေ့စွဲ စသည် သူ့အလိုလို ပြောင်းလဲ နေတဲ့ အချက်အလက် (data)တွေဟာ Field တွေပါပဲ။ Field လို့ပြောရင် Mail-merged Field, Cross Reference, Hyperlink အားလုံးဟာ Field တွေပါပဲ။ Field ကို "Word ထဲက စာအရှင်" လို့တောင် ခေါ်ထိုက်ပါတယ်။
Q: Field အခွန်/အလွတ် ဆိုတော့ မလွတ်တာလည်း ရှိသလား ?
A: အဆင့်(၁)မှာ ကီး [Ctrl+F9] ကို နှိပ်တော့ Field အခွန် တစ်ခု ရလာပါတယ်။ အဲ့အခွန်ထဲမှာ ဂဏန်းတွက်ဘို့ ညီမျှခြင်း (=) ရေးလိုက်တာနဲ့ ဒါ ဖော်မြူလာ Field တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။
Q: ဖော်မြူလာ Field (Formula Field) မှာ ဂဏန်းတွက်တာ ကန့်သတ်ချက် (limit) ရှိပါသလား?
A: ရှိပါတယ်။ ညီမျှခြင်း (=)နောက်မှာ တွက်စရာ တစ်ခုခုရှိရပါမယ်။ မရှိရင် ဒီလို အမှား ပေါ်ပါမယ်။ (ဒီပုံကို ရှုပါ။ )
နောက်ပြီး Switch များ သုံး၍ ဖော်မြူလာ၏ အဖြေကို တန်ဆာဆင်တဲ့အခါ ဖော်မြူလာ၏ အဖြေသည် 999999.99 ကျော်လျှင် Syntax Error ပေးပါလိမ့်မယ်။ (ဒါဆို အဖြေမှန် အစား ဒီလို ပြပါလိမ့်မယ်။ )
Q: Switch များ သုံး၍ဆိုတာ ?
A: ဖော်မြူလာ၏ အဖြေကို တန်ဆာဆင်လိုတဲ့ အခါ Switch များ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ။ အဆင့်(၄) က ရလာတဲ့ အဖြေဟာ 99999.9 ပါ။ ဒါကို 99,999.90 လို့ ပေါ်စေချင်တယ်။ (ဒါမှမဟုတ်) "ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine and 90/100" လို့ ပေါ်စေချင်တယ် / တန်ဆာဆင်ချင်တယ် ဆိုရင် Switch ကို သုံးရပါမယ်။ Switch အကြောင်း နောင် အလျဉ်းသင့်မှ ဆက်ပြောပြပါမယ်။ Word ၏ Help ဖိုင်မှာလည်း ဝင်ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Q: Field နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြား Shortcut Key တွေ ရှိသေးလား ?
A: ရှိပါတယ်။ အဆင့်(၄) မှာ တစ်ခု နှိပ်လိုက်ပါတယ်။ [F9] ပါ။
[Shift+F9] ကို နှိပ်ရင် ကိုယ် ကာဆာချထားတဲ့ Field တစ်ခုကို ဖော်မြူလာ နဲ့ အဖြေ အလှည့်စီ ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ ကီးကို ခဏ ခဏ လေ့ကျင့်စေလိုပါတယ်။ Field တစ်ခုအပေါ် Right Click ခေါက်၍ ပေါ်လာမည့် Menu မှ Toggle Field Code ကို ရွေးနှိပ်ခြင်းနှင့် အလားတူ ဖြစ်ပါတယ်။ (Toggle Field Code)
[Alt+F9] ကို နှိပ်ရင် ဖိုင်ထဲရှိ Field အကုန်လုံးကို ဖော်မြူလာ နဲ့ အဖြေ အလှည့်စီ ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ (Toggle All Field Codes)
[F9] ကို နှိပ်ရင် အဖြေကို update လုပ်ပေးပါတယ်။ (update field) ဒါဟာ Firefox မှာ F5 ကီး နှိပ်တာနဲ့ အလားတူပါပဲ။ Field တစ်ခုအပေါ် Right Click ခေါက်၍ ပေါ်လာမည့် Menu မှ Update Field ကို ရွေးနှိပ်ခြင်းနှင့် အလားတူ ဖြစ်ပါတယ်။
[Ctrl+Shift+F9] ကို နှိပ်ရင် Field ၏ အဖြေကို ရိုးရိုး စာအသေ အဖြစ် ပြောင်းပေးပါတယ်။ စာအသေပေါ်မှာ [Shift+F9] နှိပ်လည်း ဖော်မြူလာ ပြန်မပြနိုင်တော့ပါ။
Q: နမူနာပြတဲ့ ပုံမှာ Field နေရာမှာ ကာဆာ ချလိုက်ရင် မည်းနေ (Shading) တာတွေ့တယ်။ ဒီစက်မှာ မမည်းဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ?
A: Field နေရာမှာ ကာဆာချပေမည့် shading မပေါ်ရင် Field ကို ကိုင်တွယ်ရ ခက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ Options ထဲက ဝင်ပြင်ပါ။
Word 2007 ဆိုရင် Application Button > Word Options > Advanced > Show Document Contents > Field Shading ကို when selectedဒါမှမဟုတ် Always ဟု ထားပေးရပါမယ်။
Word 2003 ဆိုရင် Tools Menu > Options > View > Show > Field Shading ကို when selected ဒါမှမဟုတ် Always ဟု ထားပေးရပါမယ်။
Always ဟုထားရင် ကာဆာမချပဲ shading ပေါ်နေတတ်ပါတယ်။ when selected သာ ထားရန် ညွှန်းပါရစေ။
များလွန်းရင် ဆက်ဖတ်ချင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ Q & A ဒီမှာတင် ရပ်ပါမယ်။ မှားတာတွေ့ရင် ပြင်ဖတ်ပေးပါ။ ကျနော့်လည်း လက်တို့ပါ။ ဒါမှ ပြင်လို့ ရမှာ :)
please credit to source: layhtankone.wordpress.com
Posted by Ko Gyii at 11:35 PM
Labels: Formula Field , Microsoft , Microsoft Word , Office , Tip , Word , အိုင်တီ , အထွေထွေ ဗဟုသုတ
ranongfishermans Wednesday, February 08, 2012